Iindaba - Kufuneka wenze ntoni xa kukho ingxaki nge-injini yesilinda yegasket yentloko
Xa itankana lesilinda gasket lonakele okanye lingatywinwanga, injini ayinakusebenza ngokwesiqhelo kwaye kufuneka itshintshwe kwangoko. Amanyathelo athile ngala alandelayo:
1. Susa isiciko sevalvu negasket.
2. Susa indibano yengalo yevalufa uze ukhuphe intonga yokutyhala yevalve.
3. Khulula kancinci kancinci ususe iibholiti zentloko yesilinda ngamanyathelo amathathu ngolandelelwano macala ukusuka kumacala omabini ukuya embindini, nokususa intloko yesilinda negasket.
4. Susa izinto zokomba kumphezulu odibeneyo webhloko yesilinda kunye nentloko yesilinda.
5. Guqula icala eligudileyo okanye icala elibanzi le-cylinder gasket entsha uye kwibloko yesilinda. Okwahlukileyo kuyinyani kwiibhloko zesilinda zentsimbi kunye neentloko zeesilinda zentloko.
6. Xa ufaka intloko yesilinda, sebenzisa kuqala iibholiti zokubeka ukubeka intloko yesilinda. Emva kokuba ezinye iibholiti zentloko ziqinisiwe ngesandla, susa iibholiti zokubeka kunye nokufaka iibholiti zentloko yesilinda.
7. Sebenzisa i-torque utsalo ukuze uqinise ngokuthe ngcembe kwi-torque esemgangathweni kumaxesha ama-2-3 ngokulandelelana kokuphamba.
8. Fakela intonga yokutyhala yevalve kunye ne-valve rocker arm assembly kwindawo yokuqala. Emva kokujonga nokulungelelanisa ukucoca kwevalve, faka i-gasket kunye nesembozo sevalve.
I-Yantai Ishikawa yokuTywina iTekhnoloji Co., Ltd. igxile kwimveliso kunye nokusebenza kweepleyiti ezahlukeneyo zokutywina, iigaskethi kunye namakhaka obushushu. Licandelo likasekela sihlalo we-China Friction kunye noMbutho weZinto zokuTywina kunye neyunithi kasihlalo we-Multi-cyilinda ye-Injini yeeDizili encinci ye-Injini yoMlilo yangaphakathi. Yeyona inkulu e-China Enye yeenkampani ezijolise kwimveliso yokutywina.
Ukulungiselela ukuziqhelanisa nenkqubela phambili yophuhliso lokhuselo lokusingqongileyo kwilizwe liphela, ipleyiti yegasket ye-non-asbestos eyenziweyo kunye neplate gasket eyomeleziweyo ifumene amalungelo awodwa omenzi wechiza, kwaye ipleyiti engeyo-asbestos iye yamkelwa yiarhente yovavanyo enegunya yaseYurophu; Iimveliso zokukhusela ubushushu zifumene amalungelo awodwa omenzi wechiza.